Matetika betsaka ary mitombo loatra ny fandaniana (consommation) ka tsy maharaka ny vola miditra ary mampitotongana hatrany ny toekarena. Tsy ampy mihitsy araka izany ny fidiram-bola ka tsy maintsy mitrosa ny ankamaroan’ny firenena. Na ireo lazaina matanjaka amin’izao fotoana izao aza dia miditra amin’ny fitrosana. Voakasik’izany ny amerikanina izay efa sady mitotongana ny toekarena noho ny politikan’i Donald Trump. Ao ihany koa ny olan’ny Anglisy ateraky ny brexit « BRITISH EXIT » izay fialan’ny Royaume Unie ao amin’ny vondrona Eoropeanina ary hita ho tsy nahomby hatrany ka mampihisatra ny toekareny. Amin’izao fotoana izao dia ireo firenena arabo mpanondrana solika mivondrona ao amin’ny OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) tahaka ny Arabia Saodita, Emirats Arabo no manam-bola ary miezaka ny tsy hitrosa mihitsy. Ankoatr’ireo dia hita ho manankarena be ihany koa i Sina ary izy mihitsy no mampirisika ireo firenena matanjaka hitrosa any aminy. Anisan’ny tafiditra ao anaty haraton’ny fitrosana i Madagasikara noho ny fidiram-bolam-panjakana ambany. Tsy maintsy mitrosa ho fanentsenana ny banga saingy hatreto dia mbola hita ho tsy tafavoaka mihitsy. Ireny trosa ireny anefa dia holovain’ny taranaka saingy azo foanana ihany ny ampahany sasany raha mahay mifampiraharaha tsara ny mpitondra.